Biyaha Dhaldhalaalaysa ee Shiinaha Jilicsanayaasha Maqaar -ku -dhegga ee Dabool leh oo leh Warshadaha Sanduuqyada Calaamadaha Gaarka ah | Weiti
Qaawan Daad Jaad Cad ...
1. qufulka midabka ee raaga
Calaamadda Gaarka ah ee Cusub ee Dheer ...
Dhalo dhalaalaya Muraayadda Lip dhalaalaya ist Dein Lipgloss für wunderschöne langanhaltende kr ...
Nafaqada Caadada Midabka leh ...
Khariidadda Faruuraha Gaarka ah ee Gaarka ah Tiro kugu filan si aad u geliso midabo kala duwan ...
Biyo Jilicsan oo Jilicsan Jilleeya Indho -ku -dheg Dheg Dheg leh Oo Sanduuqyada Calaamadda Gaarka ah leh
1, 2 in 1 qalinka indhashareerka ah ee isku dhejiya
2, Biyo -la’aan iyo muddo dheer
3, Indha -indheynteena sixirka ah waxaa loogu talagalay jeedal been ah oo lagu dhejiyo
4, Qaacido cusub oo leh teknolojiyad dhejis ah
Qiimaha FOB: Fadlan noo soo dir faahfaahinta qiimaha saxda ah
MOQ: 100 Cad
Awoodda Bixinta: 100000 Cadad/Bil
Logo: Astaanta khaaska ah ee la diyaarshay ayaa la heli karaa
Email noo soo dir WhatsApp
Dareere Is-dhejis Qalinka Eyeliner
Kalocils 2 in 1 Is-Adhesive Liquid Eyeliner waa qaacido cusub oo leh teknolojiyad dhejis ah, is-dhejis ah, aamin ah oo dabacsan, waxyeello uma geysanayso indhahaaga, ur wanaagsan, siman oo dabiici ah, biyo-la'aan iyo dhidid la'aan, waa doorashada ugu fiican adiga jeedal, ku siin waayo -aragnimo la yaab leh. Eyeliner -kiinnu waa labada xabag oo karbaash ah iyo indho -indhayn, oo xoog u leh jeedal, waxaad ku xidhan kartaa indhashareer indhashareerkeenna sixirka ah halkii aad ka heli lahayd xabagta ama indha -indheynta birlabka.
La isku haleyn karo oo sahlan in la dalbado
Ugu fudud in la mariyo jeedal ilaa 30 ilbidhiqsi. Waqtigaaga badbaadi oo fududee tallaabooyinka. Dhufeysku wuxuu kaa xoreynayaa welwelka iyo ceebta ka timaadda indhashareerka. 3 Tallaabo oo fudud oo lagu dhejiyo indhashareerka oo aad ugu habboon kuwa bilowga ah! Rux qashinka, ka dibna ku sawir mashiinka weelka wejigaaga karbaashka, ugu dambayntii karbaash. Waxaa loo adeegsan karaa karbaash kasta oo been ah.
Sida loo marsado indho -ku -dhegga koolada?
1. Rux-raaci indhaha 10-20 jeer kahor isticmaalka.
2 Ku sawir mashiinka indha -ku -rimida salka indhahaaga.
3 Ku dabool baalasha indhaha tweerka.
4, Si tartiib ah u cadaadi baalasha indhaha aagga isha oo dhammee xidhashada.
Sidee buu u shaqeeyaa indho -ku -dhegga koolada indhaha?
Badeecadu waxay u shaqaysaa iyadoo la dhigayo xarriiq siman oo sax ah oo dhejis ah (iyo midab, haddii aad isticmaalayso madow), taas oo noqonaysa mid cakiran dhawr ilbidhiqsi ka dib. Nooc kasta oo karbaashyo been ah ayaa markaa lagu dhejin karaa xariiqda aan caddayn, halkaas oo ay ku sii jiri doonto sida xabagta (laakiin annaga oo ah kuwa sida caadiga ah loo karbaasho, oo leh fawdo yar iyo faraha dheggan).
Khaanadaha Calaamadaha Gaarka ah ee Khaaska ah
Waxaan haynaa sanduuqyada baakadaha indhaha ee kala duwan, kiisaska indhaha, iwm oo ku jira kayd diyaarsan oo ballaaran. Taa bedelkeeda, adeeg summad khaas ah oo la habeeyay ayaa diyaar noo ah. Caadi ahaan, sanduuqyada kaydka ama kiisaska diyaarka ah, waxaan taageernaa Daabacaadda UV 3d, haddii aad u baahan tahay qaab iyo cabbir ka duwan sanduuqyada, sidoo kale waa la shaqsiyeyn karaa. Waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa inaad noo soo dirtaa astaanta iyo midabka aad rabto. Waxaan hubaal ahaan kuu samayn doonaa baakadaha baalasha indhaha ee ugu fiican.
Hore: Qiimaha Jaban ee Jaban ee Xariiqa Calaamadda Gaarka ah ee Karbaashka 25mm Mink Eyelash Vendor
Xiga: OEM 2020 Kulul Indhaha Caanka ah ee Biyo -La'aanta ah Sixirka Eyeliner Xabagta Maqalka ah ee Xabagta ah
indhashare dhejis ah
Eyeliner Astaanta Gaarka ah
Muraayad Glitter Eyeliner
Biyaha La Kiciyey Eyeliner
indho -jaraha jumlada ah
Custom jumlada Custom gaarka ah Adhesi biyuhu ...
OEM Factory Bulk koollo 2 in 1 cusbo Biyo ...
Is koollo biyuhu Black Liquid Eye Liner ...
Calaamadda Gaarka ah ee Gaarka ah ee Biyuhu Mareenka Indhaha ...
2-in-1 Dalbashada Jeeditaanno Been Abuur ah Eyeliner Pr ...
Eyeliner Liquid Liquid, Liner Adhesive Waayo Norma ...
Kordhinta Indhaha, Iibiyeyaasha Indhaha, dibinta, indho -dejiye, Jeexa indhaha, jeedal mink,